Indonezia: Fankalazana Ny Taombaovao Shinoa Tany Jakarta · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Boukary Konaté
Voadika ny 13 Febroary 2018 2:26 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 繁體中文, 简体中文, srpski, Français, English
Nandritra ny 30 taona mahery, voarara hoan'ny Shinoa tany Indonezia ny fanehoana ny kolontsainy. Nambaran'ny fitondrana tsy refesi-mandidy “Lamina vaovao” teo ambany fitondran'ny filoha teo aloha Suharto fa tsy ara-dalàna ny fampiasana ny fiteny sy ny tarehintsoratra Shinoa. Noho izany, tsy mbola nankalazaina mihitsy ny Imlek (Taombaovao Shinoa). Tamin'izany fotoana izany, niteraka fiantraikany goavana ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitondrana: fonja na “fanjavonana tsinahy”.
Noho ny Filoha Wahid tamin'ny taona 2000, nofoanany ny fanavakavahana natao tamin'ireo Shinoa sy ireo vitsy an'isa tamin'ny ankapobeny, afaka maneho ny kolontsainy amin'izao fotoana izao ny Shinoa any Indonezia. Nanambara ny Taombaovao Shinoa ho andro tsy fiasana ny Filoha Wahid, izay nodimbiasan'ny Filoha amin'izao fotoana izao Megawati Soekarnoputri. Ankehitriny, afaka mankafy io andro fialantsasatra io avokoa ny Indoneziana rehetra, fa tsy ny Shinoa any Indonezia ihany.
Na izany aza, manohy milaza ampahibemaso ny vondrona ara-pivavahana hiringiriny fa voarara ho an'ny Miozolomana ny mifampiarahaba “Imlek sambatra“, indrindra moa fa ny mandray anjara amin'ity fankalazana ity. Nandefa ity hafatra ity ihany koa izy ireo nandritra ny Noely Kristianina. Ho an'izany vondrona izany, Mohd Yusri Hafiz Yusof , mpianatra Maleziana avy ao amin'ny Oniversite Islamika Akademi Pengajian ao Malezia, any Kuala Lumpur, namaly hoe:
Tantaran'ny Indonezia farany
6 andro izayAzia Atsinanana
29 Jona 2021Azia Atsinanana
01 Mey 2021Azia Atsinanana
Hetsika Biru Terong : Fampiasàna ny herin'ny lahatsary hitondra fiovàna sôsialy ao Indônezia